Imemori yeGel Memory Foam
& Umatshini oMathumbu oMdumba oMdaka oMeleleyo
URAYSON uza kukubonisa ngeenkcukacha ezithile ze-mattress yasentwasahlobo.RAYSON ineendibano zocweyo zoqeqesho kunye netekhnoloji enkulu yokuvelisa. i-mattress yasentwasahlobo esiyivelisayo, ngokuhambelana nemigangatho yokuhlola umgangatho wesizwe, inesakhiwo esifanelekileyo, ukusebenza okuzinzileyo, ukhuseleko olufanelekileyo, kunye nokuthembeka okuphezulu. Ikwafumaneka kwiintlobo ngeentlobo kunye neenkcazo. Iimfuno ezahlukeneyo zabathengi zinokugcwaliseka ngokupheleleyo.
ye Rayson Mattress inkumbulo i-foil coil ye-coil ye-sprung idibana nemigangatho ephezulu kwimveliso yerabha kunye neplastiki. Le migangatho inyanzeliswa ngokungqongqo kwaye ibekwe esweni liqela lethu elizinikeleyo.
Le mveliso inokwakhiwa okuzinzileyo. Ubume bayo kunye nokuma kwayo akuchaswanga ngumahluko wobushushu, uxinzelelo, okanye naluphi na uhlobo lokungqubana.
Hard Foam ingavalelwa umatrasi
bonisa ukugcinwa ngokulula. Isebenzisa iziphelo ezinokuchasana okuhle kwezinyibilikisi eziqhelekileyo kunye nokususa amabala athile ngala manzi amkelekile.
Le mveliso inokuthenjwa kwaye yomelele ayifuni ukulungiswa okuphindiweyo ngexesha elifutshane. Abasebenzisi banokuqinisekiswa ngokhuseleko xa beyisebenzisa.
Imveliso yenzelwe ngendlela yokwenza ubomi babanye abantu bube lula kwaye bube lula ngakumbi kuba bunikezela ubungakanani obufanelekileyo kunye nokusebenza.
Iigwebu ezilukhuni ezifakwe umatrasi